हामी यसरी भोक भोक्कै कति दिन सम्म बस्ने ? सहयोगको खानेकुरा लिएर बाड्न जादा देखियो यस्तो दृश्य (भिडियो सहित) – Dainik Samchar
May 26, 2021 175
Prevडाक्टरकाे सल्लाह बिना आफैं औषधि किनेर खाँदा यति ठूलाे क्ष`ति ! सिटामोल खाएपछि हल्का भएको ज्वरो फेरि अर्काे दिन आयो
Nextभका भक मर्न थाले टर्की कुखुरा , देखिन थाल्यो यो रोग , साबधान रहनुहोला !
अञ्जली अधिकारी किन विवादमा आइरहन्छिन् ? किन आजकल प्रकाश सपुतको गीतमा देखिन्नन् रुँदै सुनाइन् आफ्नो पीडा (भिडियो हेर्नुस्)
पाँचखालमा ‘जियोफिजिकल सर्भे’ सुरु